राजाले देश बचाउने ?
मुख्य पृष्ठविचार विश्लेषणराजाले देश बचाउने ?
केही दिनअगाडि बुटवलबाट सुरु भएको ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने जुलुस पश्चिममा धनगढीसम्म पुग्यो भने पोखरा, काठमाडौँ हुँदै पूर्वमा झापासम्म पुग्यो । सहभागीहरुको सङ्ख्या पनि राम्रो नै देखियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको तस्बिर बोकेर निस्केका ती मुलुकहरुको नेतृत्व गर्न कमल थापाहरु तम्सिए तर जुलुसले कमल थापा प्रवृत्तिलाई स्वीकार गरेन ।
कम्युनिस्ट सरकारबाट निरास भएका जनताको सहारा प्रतिपक्ष हुनु पथ्र्यो । त्यसमाथि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस जनतासँग हुनुपथ्र्यो । निरासाबाट गुज्रिँदै गरेको देशमा आशा सञ्चार गर्न सक्नु पथ्र्यो प्रमुख प्रतिपक्षले । त्यो काम हुन सकेन र मान्छे झन् निरास भए । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैबाट निरास भएका जनता कहाँ जाने त ? यसैकारण मान्छेहरु राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै सडकमा निस्किए, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अनिकालको खलीपिना मात्र हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
दश बर्षे द्वन्द्वको उत्तरार्धमा माओवादीले भनेको थियो, ‘हामीले दरबारसँग सहकार्य गरेर जनयुद्ध लडेका हौँ ।’ २०४६ सालभन्दा पहिलेदेखि नै दरबार दुई खेमामा थियो । मुमा बडामहारानी, वडामहारानी, ऐश्वर्य युवराज ज्ञानेन्द्र र पुरातनवादी पञ्चको एउटा धार थियो । राजा वीरेन्द्र उदारवादी थिए । सुधारवादी र उदारवादी पञ्चहरु राजा वीरेन्द्रसँग थिए तर सेनाभित्र राजा वीरेन्द्रको बलियो पकड थिएन भनिन्थ्यो ।
सरकार र प्रतिपक्ष दुवैबाट निरास भएका जनता कहाँ जाने त ? यसैकारण मान्छेहरु राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै सडकमा निस्किए, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अनिकालको खलीपिना मात्र हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
सूर्यबहादुर थापाले देशमा द्वैध शासन छ भनेर त्यसै दरवारी गुटतिर सङ्केत गरेका थिए । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह पनि पचेको थिएन दरबारको अनुदार पक्षलाई । २०४६ सालको परिवर्तन त झन् पच्ने कुरै थिएन । दरबारको त्यहीअनुसार धारसँग सहकार्य गरेर २०४६ सालको राजनीतिक उपलब्धिविरुद्ध युद्ध सुरु गरेको हो माओवादीले । मुलतः यो संसदीय पद्दतिविरुद्धको गठजोर थियो । दरवारको यही दुई खेमाको च्यापबाट नै दरबार हत्याकाण्ड गराएको हो भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुने छैन ।
घटनाक्रमले पनि माओवादी र दरबारको सहकार्य पुष्टि गर्दै गयो । होलेरीमा आफ्नो घेरामा परेका माओवादीसँग हात मिलाएर फिर्‍यो शाही सेना । युवराज ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि माओवादीका कार्यकर्ताले भित्ताहरु रङ्गाउँदै लेखे, ‘राजा ज्ञानेन्द्र शाह मुर्दावाद ।’ त्यसको दुई दिनपछाडि तिनै कार्यकर्ताले मेटे भित्तामा लेखिएको नारा । यसले के अर्थ दिन्छ भने सम्बन्ध थाहा नभएका तल्लो तहका कार्यकर्ताले भित्तामा लेखेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे, पछि माथिको निर्देशन आयो र मेटे ।
राजा ज्ञानेन्द्रले चिहानबाट झिकेर विघटित संसद्मा प्राण भरे । त्यही संसद्ले गणतन्त्र घोषणा ग¥यो, अनि राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट निस्केर लुरुलुरु बाटो लागे । खड्ग ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्दा त नेकपा फुटेर यत्रो तमासा भएको छ । कुनै राजा आफैँले पुनस्र्थापना गरेको संसद्बाट अपदस्त भएर चुपचाप बाटो लाग्छ ? तर राजा ज्ञानेन्द्र बाटो लागे । यसको कारण भनेको माओवादीसँगको सहकार्य नै हो । ज्ञानेन्द्र स्वयम्ले राजसंस्था समाप्त गरेको हुन् । त्यसैले ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो छातिमा टाँसेर राजा आऊ देश बचाऊ भन्नु बेकार छ ।
युवराज ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि माओवादीका कार्यकर्ताले भित्ताहरु रङ्गाउँदै लेखे, ‘राजा ज्ञानेन्द्र शाह मुर्दावाद ।’ त्यसको दुई दिनपछाडि तिनै कार्यकर्ताले मेटे भित्तामा लेखिएको नारा । यसले के अर्थ दिन्छ भने सम्बन्ध थाहा नभएका तल्लो तहका कार्यकर्ताले भित्तामा लेखेर आफ्नो दायित्व पूरा गरे, पछि माथिको निर्देशन आयो र मेटे ।
दोस्रो पुस्ता पारस हुन्, उनमा अब राजगद्दी समाल्न सक्ने ज्ञान छैन । हिमानी शाह भारतीय छोरी हुन् । भारतमा सोनिया गान्धी र वर्मामा आङसाङ सुकीको अवस्था के छ विदेशकी छोरी भएका कारण ? त्यसैले हिमानीले राजसंस्था अगाडि बढाउने सम्भावना छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बेबी किङको कुरा उठाएका थिए । तर प्रचण्डले राष्ट्रपतिको उधारो लड्डु देखाएपछि बेबी किङको कथन पनि टुङ्गिएको थियो । यो मुलुकको निर्माण राजाले गरेका हुन् । राजा महेन्द्र उदारणीय राष्ट्रवादी थिए, देशको विकासको जग बसाएका थिए महेन्द्रले । राजसंस्थाले देश र जनताप्रति बेइमानी गरेको छैन । तथापि अबका दिनमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा होलान् र देशको रक्षा होला भन्ने भ्रम पालेर बस्नु असान्दर्भिक हुनेछ ।